Akhriso:-Magacyada & Beelaha Baarlamaanka labaad ee Hir-Shabeelle - Awdinle Online
Guddiga farsamada iyo dhismaha Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle ayaa waxaa xalay saqdii dhexe ay ku dhawaaqeen liiska Xildhibaannada Baarlamaanka labaad ee Maamulka Hir-Shabeelle, kuwaas o xulistooda maalmihii la soo dhaafay ay socotay.
Xildhibaannada lagu dhawaaqay oo tiro ahaan gaaraya ilaa 90 Xubnood, kuwaas oo u badan Dhalinyaro, waxaana soo xulay Odayaasha Dhaqanka ee degaannada Hir-Shabeelle.
Xildhibaannada aya sidoo kale waxaa ay isugu jiraan kuwo horay uga tirsanaa Baarlamaankii koobaad ee Hir-Shabeelle iyo kuwo ku cusub Siyaasadda, kuwaas kasoo dhex-muuqday liiska Xildhibaannada Cuusb.
Ku dhawaaqista liiska Xildhibaannada Baarlamaanka labaad ee Maamulka Hir-Shabeelle ayaa waxaa ay kusoo aadeeysaa xilli weli aan hehsiis buuxa laga gaarin muranka kajira dhanka awood qeybsiga Beelaha ee Madaxda sare ee Hir-Shabeelle.
Previous articleWabarka Beesha Baadicadde oo ka baxay Shirka Maamul dhisida Hir-Shabeelle
Next articleXog Xasaasi ah: Waa kuma Teliyaha Cusub ee NISA loo magacaabi rabo
Madaxweynaha Hir-Shabeelle? Safriika Midowga Yurub oo kulan xasaasi ah yeeshay
Xildhibaano hal Arrin ku cadaadinaya yuusuf Dabageed
Shil khasaaro khasaaro geystay oo ka dhacay Dhuusamareeb
Nabadoono caan ah oo lagu dilay Magaalada Muqdishoda
Ciidamada dowladda oo degaano dagaal kula wareegay
Mas’uuliyiin ku dhaawacmay qarax ka dhacay Muqdisho
DEG DEG: Qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho
Madaxda Dowlad Goboleedyada oo kulan gaar ah yeelanaya
Uganda oo sheegtay inay weerar ku dishay 189 ka tirsan Al-Shabaab